Liiska Dhaawacyada Real Madrid Oo Hal-xidhaale Ku Noqday Tababare Lopetegui Iyo Gareth Bale Oo Ku Biiray Isco & Marcelo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Liiska Dhaawacyada Real Madrid Oo Hal-xidhaale Ku Noqday Tababare Lopetegui Iyo Gareth Bale Oo Ku Biiray Isco & Marcelo
(30-9-2018) Weeraryahanka reer Wales ee Gareth Bale ayaa ku biiray liiska dhaawacyada Real Madrid, kaddib markii garoonka laga saaray ka hor intii aanay bilaabmin qaybta labaad ee ciyaartii goolal la’aanta ku dhamaatay ee Madrid Derby.
Cayaartan oo ahayd mid aad u adkayd ayaa waxa xiddiga garoonka ahaa difaaca Atletico Madrid ee Gimenez oo sameeyey badbaadooyin badan oo layaab lahaa, laakiin Real Madrid ayaa waxa nolosha kusoo celiyey qaybtii labaad, laacibka uu Zidane kaydka ku dilay ee Ceballos oo beddelay Gareth Bale.
Xiddiga reer Wales ee Bale oo laga sugayey inuu hoggaamiyo kooxda ayaa saamayn ku yeelan waayey garoonka inkasta oo uu khasaariyey fursad goolka loo hor-dhigay, waxaana garoonka uu laga saaray wakhtigii nasashada oo qaybta labaad lasoo raaciyey Ceballos.
Bale ayaa uu dhaawacu ka gaadhay muruqa lugta midig daqiiqaddii 40-aad, waxaana uu ku biiray liiska ciyaaryahannada dhaawaca u jiifa ee Isco oo lagu sameeyey qalliin iyo Marcelo oo ciyaartii Valencia ee guul-darradu kasoo gaadhay ku dhaawacmay.
Si kastaba ha ahaatee, maqnaanshaha saddexdan ciyaartoy ayaa hal-xidhaale madax-xanuun ah ku ah tababare Julen Lopetegui oo kooxdiisu afartii ciyaarood ee ugu dambeeyey ay dhalisay laba gool oo kaliya.